विश्व मुटु दिवसः मुटुलाई स्वस्थ राख्न कस्तो खानेकुरा खाने ? – BikashNews
विश्व मुटु दिवसः मुटुलाई स्वस्थ राख्न कस्तो खानेकुरा खाने ?
२०७६ असोज १२ गते ९:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । शरीरको महत्वपूर्ण अंग मुटुको ख्याल नगर्दा बर्ष लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अस्वस्थ जीवनशैलीको कारण मानिसहरु मुटुरोगको शिकार भई ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । विश्वमा एक समस्याको रुपमा रुपमा देखिएको मुटुरोग नेपालमा पनि समस्याकै रुपमा देखिन थालेको छ । गंगालाल अस्पतालका अनुसार नेपालमा मुटु रोगीको संख्या २ गुणाले बढेको छ ।
सस्तो र मिठोको नाममा हरेक दिन बाटोे किनारमा बेच्न राखेको तेलमा मज्जाले तारेको मसालेदार खानाहरु खाने, खाने बित्तिकै ओछ्यानमा पल्टने, मिठो खाना पाकेको दिन एकैपटक ३ थाल खाने, मासुको परिकार भनेपछि कति खाने भन्ने बिर्सने, १०–१५ रुपैंया त हो नि भन्दै २० मिनेटको बाटोमा गाडी चढ्ने जस्ता हाम्रो अस्वस्थ जीवनशैलीले हामीलाई मुटुरोग जस्तो खतरनाक रोगबाट ग्रसित बनाउँदै लैजान्छ । यदी हामीले समयमा नै हाम्रो अस्वस्थ जीवनशैलीलै नत्याग्ने हो भने हामीले आफु र आफ्नो मुटुलाई बचाउन सक्दैनौं ।
प्रस्तुत छ मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने बिषयमा आहार तथा पोषण बिशेषज्ञ मिरा शाहसँग बिकासन्युजले गरेको कुराकानीमा आधारित हेल्थ टिप्स :
मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने ?
मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने कुरा मुटुरोगी भएका व्यक्ती र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तीहरु बाहेक कमैलाई ज्ञान हुने गरेको पाईन्छ । हामी धेरैलाई मुटुलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान त छ, तर कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेबारे हामी धेरै अनविज्ञ छौं ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्ने विभिन्न उपायहरु छन् । दैनिक आधा घण्टा हिँड्ने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, शरीरको तौल, कोलस्ट्रोलको मात्रा कति छ भनेर वर्षमा कम्तिमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र खानेकुरामा बिशेष ध्यान दिने हो भने हामी मुटुरोगबाट सजिलै बच्न सक्छौं । हामीले खानेकुरामा मात्रै पनि बिशेष ध्यान दिन सक्यौं भने हामी मुटोरगबाट ८० प्रतिशत बच्न सक्छौँ ।
मुटु रोगका लागी एउटा भिन्न खालको आहार पद्धति छन्, जसलाई उपचारात्मक जीवनशैली परिवर्तन आहार भनिन्छ ।
यो आहार मुटुरोगीका लागी बिशेष रहेको छ । यस्तो आहारले मुटुको जोखिम, पक्षघात कम गर्न सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ । यो आहारको मुख्य उद्देश्य रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाई रक्तनलीलाई सफा बनाएर मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।
मुटुलाई मात्र नभएर शरीरका अन्य विभिन्न भागलाई स्वस्थ राख्न हामीले आफ्नो आहारमा पर्याप्त मात्रामा पानीमा घोलिने रेसायुक्त खानेकुरालाई प्रााथमिकता दिनुपर्छ । आफ्नो तौल तथा कामको आवश्यकता अनुसार मात्र क्यालोरीको सेवन गर्नुपर्छ ।
-खानामा चिल्लो पदार्थको जम्मा क्यालोरीको १५ देखी २० प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्ने ।
– खाद्यपदार्थबाट पाउने कोलेस्ट्रोल बढीमा २०० मिलि ग्राम मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– जनावरबाट पाउने चिल्लो पद्धार्थ बढीमा ७ प्रतिशतमात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
– दैनिक भोजनमा १५ देखी २५ ग्राम फाइबरको प्रयोग गरेमा राम्रो हुन्छ ।
– टीएल्सि डाइटमा प्रयाप्त मात्रमा फलफूल तथा हरियो सागपात, तरकारी, रेसायुक्त खानेकुरा, दाल(गेडागुडी, बिउ इत्यादि रहेका हुन्छन् ।
– दैनिक ३० मिनेटसम्म नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने । साइकिल चलाउने, कुद्ने, दौडने, पौडी खेल्ने जस्ता कृयाकलाप आदी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था हेरेर गर्ने ।
– खानेकुरामा चिल्लोको कम प्रयोग गर्ने, कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्ने, रातो मासुलाई सक्दो आफ्नो खानाबाट हटाउन कोसिस गर्ने । अण्डाको पहेँलो भाग नाखाने, नूनको कम प्रयोग गर्ने ।
– मासु खाए पनि थोरै मात्रामा सेतो मासु(कुखुरा, माछा)को प्रयोग गर्ने, अण्डाको सेतो भाग मात्र खाने ।
– फलफूलमा स्याउ, केरा, खरबुजा, सुन्तला, मेवा, नास्पाति, आरु, अम्बा, एभोकाडो, मौसम अनुसारको ताजा फलफूल आदिको सेवन गर्ने ।
– तरकारीहरुमा ब्रोकाउलि, काउलि, सेलेरि, काक्रो, पालुङो, रायो, मुनटा, गान्ते मुला, गाजर्, सबै प्रकारको, मौसम अनुसारको तरकाारिको प्रयोग गर्ने ।
– अन्नहरुमा जौ, उसिनेको चामल, कोदो, फापर आदि तथा दालहरुमा सबै प्रकारको सिमि, राज्मा, गेडागुडी, बदाम, ओखर, काजु, फर्सीको बिउ, आलसको बिउ, सूर्यमुखीको बिउ आदिको प्रयोग गर्ने ।
– ३६ जना व्यक्तीमा ३२ दिनसम्म यो उपचारात्त्मक जीवनशैली परिवर्तन (टी.एल.सि) आहार लागु गरिएको एउटा अध्यययनले उच्च कोलेस्ट्रोल भएको ११ प्रतिशत व्यक्तीमा खराब कोलेस्ट्रोल कम भएको देखिएको थियो ।
– रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ।
– शरिरको तौल नियन्त्रण ।
– नियमित शारिरिक अभ्यास, कम क्यालोरीयुक्त खानाको सेवन, खानेकुरामा प्रयाप्त मात्रामा रेसायुक्त पधार्थको प्रयोगले शरिरको तौल घटाउन सहयोग पुर्याउँदछ ।
– रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण ।
– हाम्रो शरीरको रगतमा भएको ग्लुकोजको मात्रालाई समेत नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्दछ । खानेकुरामा अत्याधिक मात्रामा रेसाको प्रयोगले ग्लुकोजको मात्रालाई मिलाउन मद्दत गर्दछ ।
– उच्च रक्तचापलाइ नियन्त्रण गर्दछ ।
– यसको मूख्य उद्देश्य चिल्लो पदार्थलाई एकदम कम गरेर राम्रो एल्डिएल कोलस्टोरोल बढाउने काम गर्दछ ।